Shantii Guur ee Dunida Ugu Cajiibsaneyd+Sawiro | Xaqiiqonews
Shantii Guur ee Dunida Ugu Cajiibsaneyd+Sawiro
Hase ahaatee xaaladaha qaarkood guurka ayaa ka baxa qaababkii lagu ogaa oo waxaad argeysaa guur dumar ay guursanayaan xaywaan ama ma noole, ama dhanka kale rag guursanaya sawir iwm.
Hadaba qormadani , xaqiiqonews waxa ay soo gudbineysaa 5-tii guur ee ugu cajiibsanaa ee taariikhda la diwaan geliyo.
-Nin Guursaday Xaasibtiis Oo Meyd ah
Shady Devi oo u dhashay Thailand ayaa guursaday saaxibtiis oo la dilay meydkeeda, ka dib markii uu dareemay in uu danbi ka galay markii uu diiday dalab guur oo ay horay ugu soo bandhigtay
Shady Devi ayaa sheegay in uu ka qowmameynaayo diidmadii dalabka saaxibtiisa dhimatay oo horay uga dalbatay in uu guursado.
-Nin Guursaday shakhsiyad Khiyaali ah
Wiil u dhashay dalka jabaan ayaa jeclaaday gabar ku jirta Games-ka taleefonka oo lagu magacaabo “Nina anagasaki” isagoo arooskeeda u dhigay xaflad uu ku casuumay saaxibadiisa, si uu u iclaamiyo in uu guursday gabadha laga dhax arki karo oo kaliya kombuyuutarada iyo taleefonada.
-Haweeney Hal mar labo nin wada guursatay
Gabar lagu magacaabo Maria Botasaki ayaa ku wareertay in ay kala doorato ninkeed Pol iyo saaxibkeeda cusub ee petter, iyadoo ugu danbeyn go,aansatay in labadooda ay wada kulmiso waxa ayna saaxibkeed ka dalbatay in uu aqablo in iyado iyo ninkeed uu kula noolaada gurikooda oo ku yaalla magaalada Barking city ee ingirriiska.
–Lamaane Aroos ah oo dhiigga iska caba
Labadan lamaane oo iska bartay kuna saaxibay internet-ka ayaa ugu danbeyn is guursaday, balse arinta cajiibka ayaa waxa ay tahay in labadooda mar walbo qofba kan kale uu dhiigga ka miirto oo uu cabo iyagoo arintaasi ku micneeyey jaceyl.
Aro Driven iyo Lea Pinangovak ayaa tan iyo waqtigii ay is guursadeen waxa ay wadaan jaceyl dhiig miirasho ah.
–Haweeney Guursatay Taalada baariis ee ‘Efil”
Haweeneydani oo lagu magacaabo Erika ayaa guursatay derbiga, ka dib markii ay sheegtay in jaceyl ay u qaatay derbiga burjiga Efil waxaana islaantani markii danbe ay ku caan baxday magaca ah Erika Efil iyado sidoo akle jiifan jirtay habeenkii derbiga hoostiisa.
Erika ayaa shumin jirtay taalada, waxa ayna ku doodi jirtay in ay jeceshahat taalada Efil.